Duulimaadyadii Ciraaq, Spain, Kenya, Slovakia ayaa hadda ka bilaabanaya Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Duulimaadyadii Ciraaq, Spain, Kenya, Slovakia ayaa hadda ka bilaabanaya Ruushka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Ciraaq • Wararka Kenya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Slovakia Wararka Jebinta • Wararka Spain • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wareegtada ayaa si kumeel gaar ah u xaddideysa gelitaanka Xiriirka Ruushka ee muwaadiniinta shisheeyaha iyo dadka aan haysan dhalashada sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus. Dukumintiga lifaaqa ayaa go'aaminaya liiska waddamada, laga bilaabo muwaadiniinta laga yaabo inay ka soo galaan Ruushka meelaha laga soo galo hawada.
Ruushka ayaa ballaariyay liiska dalalka, oo muwaadiniinta mar kale loo oggolaan doono inay Ruushka ku galaan diyaarad.
Ciraaq, Spain, Kenya, Slovakia ayaa lagu daray liiska dalalka uu Ruushku dib u bilaabay adeegga hawada.
Joojinta Ruushka ee duullimaadyada Tansaaniya sababo la xiriira xaaladda cudurrada faafa ee dalka ayaa la kordhiyay illaa 1 -da Oktoobar.
Wareegto ka soo baxday golaha wasiirrada oo lagu sii daayay bogga rasmiga ah ee macluumaadka sharciga, ayaa saraakiisha dawladda Ruushku waxay ku dhawaaqeen ballaarinta liiska dalalka, muwaadiniintaas oo mar kale loo oggolaan doono inay Ruushka ku galaan socdaalka hawada.
Liiska waxaa balaariyay afar dal waxaana hadda ku jira Ciraaq, Spain, Kenya iyo Slovakia.
Dukumentiga ku lifaaqan wareegtada dowladda ee ku taariikheysan 16 -ka Maarso, 2020, waxaa lagu kordhiyay jagooyinka soo socda: “Ciraaq, Spain, Kenya, Slovakia. ” Digreetada ayaa si ku meelgaar ah u xaddideysa gelitaanka Russian Federation dadka ajnabiga ah iyo dadka aan haysan dhalashada sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus. Dukumintiga lifaaqa ayaa go'aaminaya liiska waddamada, laga bilaabo muwaadiniinta laga yaabo inay ka soo galaan Ruushka meelaha laga soo galo hawada.
Dukumintiga cusub waxaa la saxeexay Sebtember 21, 2021. Xarunta dhibaatada ka hortagga coronavirus waxay hore u sheegtay in laga bilaabo taariikhdaas Ruushku dib u bilaabay adeeggii hawada Ciraaq, Spain, Kenya iyo Slovakia, sidoo kale wuxuu qaaday dhammaan xayiraadihii adeegga hawada ee Belarus.
Goor sii horreysay, Moscow waxay dib u furtay duulimaadyadii 53 dal. Dhanka kale, joojinta duulimaadyada Tansaaniya sababo la xiriira xaaladda cudurrada faafa ee dalka ayaa la kordhiyay 1 -da Oktoobar.